Egwuregwu bọọlụ 15 kacha mma | Nye m oge ntụrụndụ
Egwuregwu bọọlụ kacha mma na-egwu egwu
Isaac | 20/12/2021 15:56 | Emelitere ka 20/12/2021 16:01 | General
na egwuregwu bọọlụ na-egwu egwu chọrọ aha ọzọ karịa egwuregwu ezumike, ebe ọ bụ na edobere ha dị ka otu n'ime ihe na-eri ahụ na ụfọdụ ndị ọrụ masịrị ya. Ha abịawo imepụta oke ịnụ ọkụ n'obi, yana ndị na-eso ụzọ na-eji ejiji dị ka ndị egwuregwu ndị a, ndị na-emepụta 3D nke ha ebipụtara ma ọ bụ ihe ejiri aka mee, ndị na-emepụta ma na-ese ihe osise nke ha, wdg. Ha ejikọtala ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ ndị na-abụghị akwụkwọ nkwado, kwalite ikike iche echiche, mmetụta nke imekọ ihe ọnụ, wdg.
Ahụ ọkụ niile na-abịa kpọmkwem site na ihe na-eme egwuregwu ndị a dị iche iche, ya bụ imikpu onye ọkpụkpọ egwu na ekwe. Egwuregwu ndị a na-akọ akụkọ, na-edozi egwuregwu ahụ, ndị na-egwu egwuregwu bụ ndị na-eme egwuregwu na-aghaghị ịbanye n'ọrụ ma ọ bụ ọrụ, ya mere aha ha. Njem njem maka ndị chọrọ ibi ọnọdụ na-akpali akpali na ihe egwu dị egwu.
1 Nduzi maka ịhọrọ egwuregwu ime ihe kacha mma
1.1 Dugeons na dragons
1.2 Anya gbara ọchịchịrị
1.5 Ala amachibidoro iwu
1.6 Akụkọ ihe mere eme nke mgbanaka 5
1.8 Ọdịda nke Avalon
1.9 Onye-nwe nke Mgbaaka: Njem site na Middle Earth
1.11 Oke Ọchịchịrị
1.12 Ụjọ abalị: Ihe omume egwu egwu
1.13 Egwu Arkham
1.14 Ihe mkpuchi
2 Kedu ihe bụ RPG?
3 Ụdị egwuregwu eji egwu egwu
3.1 Dị ka ụzọ e si egwuri egwu
3.2 Dị ka isiokwu si dị
4 Otu esi ahọrọ egwuregwu eji egwu egwu kwesịrị ekwesị
Nduzi maka ịhọrọ egwuregwu ime ihe kacha mma
Fọdụ n'ime egwuregwu bọọlụ kacha dị egwu nke ị nwere ike ịzụta, yana ndị kacha ere ahịa na ngalaba a, gụnyere:
Dugeons na dragons
Ụlọ mkporo & Dragons ...
Ọ bụ otu n'ime egwuregwu bọọlụ na-eme nke ọma. Otu n'ime ndị kasị gbasaa n'ụwa. Ọ bụ egwuregwu imekọ ihe ọnụ nke na-emikpu gị n'ime ụwa anwansi. Ọ dabara site na afọ 10, yana ndị egwuregwu 2 na 4 nwere ike igwu ya. N'ime ya, ị ga-ahọrọ agwa gị ma buso nnukwu anụ mmiri ọgụ ọgụ, wee bie ndụ ọhụụ ọhụụ oge ọ bụla, ebe mkpebi na ohere pụtara na ọ bụghị otu ihe mgbe niile. Na mgbakwunye, ihe dị mma bụ na ị ga-ahụ ọtụtụ akwụkwọ nwere akụkọ na isiokwu dị iche iche ịhọrọ ma ọ bụ ịnakọta.
Zụta ulo mkporo & Dragons Njem ahụ na-amalite Zụrụ ngwa mmalite dị mkpa
Anya gbara ọchịchịrị
Ọ bụ ihe ọzọ n'ime oge ochie, ma ọ dịla ọtụtụ iri afọ kemgbe ewepụtara egwuregwu German a. Asụgharịla mbipụta nke ise n'asụsụ Spanish, nke mere na ndị na-akwado ebe a nwekwara ike ịnụ ụtọ ihe egwu dị egwu na Aventuria, kọntinent jupụtara na akụkọ ifo, ihe odide dị omimi, nnukwu anụ na ihe okike dị iche iche, nke ndị na-eme ihe nkiri ga-egwu dike.
Zụrụ Anya Ọchịchịrị
Devir Pathfinder. Iwu...
Aha ọzọ a bụ otu n'ime egwuregwu eji egwu egwu ama ama. N'ime ya, onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-enwe ọrụ nke onye na-eme njem nke ga-adị ndụ n'ime ụwa dị egwu nke jupụtara na anwansi na ihe ọjọọ. Akwụkwọ a na-agụnye iwu egwuregwu, onye nduzi egwuregwu, na iwu maka ịmepụta mkpụrụedemede dị egwu, nhọrọ mkpoputa, wdg. Egwuregwu dị mma ịmalite nyere ya mfe.
Zụrụ ụzọ finder
Egwuregwu egwu egwu Warhammer...
Warhammer chọrọ mmeghe ole na ole, amaara ya nke ọma na ụwa egwuregwu vidiyo yana n'etiti egwuregwu bọọlụ na-eme egwuregwu. Egwuregwu efu na-echetara WoW ma ọ bụ Warcraft n'ụzọ ụfọdụ, ebe ọ na-ebuga gị gaa na ụwa ochie gothic nke ihe okike, dike, ihe omimi na ihe egwu na-achị.
Ala amachibidoro iwu
Ala amachibidoro iwu nke Quetzel ...
Ọ bụ Free League Publishing mepụtara ya, na-enye ahụmịhe dị ukwuu n'ụdị ụlọ akwụkwọ ochie kachasị ọcha. Ugbu a, ọ na-abịa na mbipụta ọhụrụ ya na igwe igwe ọhụrụ iji bie ndụ ihe egwu n'ala ndị a machibidoro iwu. N'okwu a, ndị egwuregwu anaghị egwu ndị dike, ma ndị rogues na ndị mwakpo ga-eme ihe ọ bụla ọ ga-eme iji dị ndụ n'ụwa a bụrụ ọnụ ebe ndị bi na ya enweghị ike ịmata ọdịiche dị n'etiti eziokwu na akụkọ.
Zụta ala amachibidoro iwu
Akụkọ ihe mere eme nke mgbanaka 5
Egwuregwu ụgbọ elu Fantasy - The ...
Egwuregwu mkpa mepụtara egwuregwu bọọlụ RPG a nwere ntọala dabere na echiche ọwụwa anyanwụ. Edere ya na Rokugan, ebe a na-eche n'echiche na Japan feudal. Na mgbakwunye, ọ gụnyere ụfọdụ mmetụta ndị China, nke ahụ na-etinyekwa gị na akpụkpọ ụkwụ samurai, bashi, shugenja, ndị mọnk, wdg.
Zụrụ akụkọ ifo nke mgbanaka 5
Agba nke abụọ Gloomhaven -...
Asụgharịkwara mbipụta nke abụọ nke Gloomhaven n'asụsụ Spanish. Egwuregwu a abụghị otu n'ime ihe ndị a na-atụ aro ka ịmalite na ụwa na-egwu egwu, mana ọ na-elekwasị anya na ndị ọkachamara. Onye ọkpụkpọ ọ bụla na-arụ ọrụ nke onye mercenary mikpuru n'ime ụwa echiche efu na-agbanwe agbanwe. Ha ga-ejikọta ọnụ ma na-alụ ọgụ na mkpọsa dị iche iche na-agbanwe dabere na omume ndị e mere.
Zụrụ Gloomhaven 2
Ọdịda nke Avalon
Nkịta merụrụ ure: ọdịda...
Aha ọzọ maka ndị ọkachamara. Aha a na-egwu egwu na-ejikọta akụkọ akụkọ Arthurian, akụkọ ifo Celtic, na akụkọ miri emi na nke na-enye ohere ka a na-abịakwute ihe ịma aka n'ụzọ dị iche iche oge ọ bụla egwuregwu. Ị ga-eme mkpebi siri ike, nakwa ụfọdụ ndị yiri ka ha adịghị mkpa, mana nwere ike ịgbanwe ihe nke ọma n'ikpeazụ. Ị dịla njikere?
Zụrụ ọdịda nke Avalon
Onye-nwe nke Mgbaaka: Njem site na Middle Earth
Egwuregwu ụgbọ elu Fantasy -...
Aha JRR Tolkien abụghị naanị na ọ ghọrọ ihe nkiri na egwuregwu vidiyo, ọ na-abịakwa dị ka egwuregwu bọọlụ na-eme ihe na ngwugwu a. N'ime ya, ị na-emikpu onwe gị na njem site na Middle-earth, nke nwere ihe egwu na ihe odide akụkọ ifo kachasị nke saga a. A na-ekewa ike egwuregwu ahụ na mkpọsa, na ramifications, nke mere na ọ ga-eju gị anya ọbụlagodi na ị na-egwu ugboro ugboro ...
Zụrụ Onyenweanyị nke Mgbaaka
Scythe na Spanish
Mgbe ntụ nke Agha Ụwa Mbụ gasịrị, obodo ndị isi obodo nke a maara dị ka La Fábrica emechiela ọnụ ụzọ ya, na-adọta uche nke ụfọdụ mba ndị agbata obi. Eziokwu yiri nke edobere na 1920 na nke onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-egwu onye nnọchi anya nke akụkụ ise nke Eastern Europe, na-agbalị inweta akụ na ụba ma kwuo ala gburugburu ụlọ ọrụ dị omimi.
Ntụrụndụ Edge -...
Nnukwu Ọchịchịrị na-enye ọmarịcha ahụmịhe n'ụdị kpochapụla n'ezie. Egwuregwu bọọdụ ọgbara ọhụrụ juru n'ime ihe nwere obere ihe dị egwu yana egwuregwu dị mfe. Ọ na-elekwasị anya na omume nke ndị dike, na-enweghị mkpa onye ọkpụkpọ na-eme ihe dị ka onye nduzi iji chịkwaa ndị iro.
Zụrụ oke ọchịchịrị
Ụjọ abalị: Ihe omume egwu egwu
Ọgba aghara- nro - Egwuregwu ...
Strategy, mgbagha, imepụta ihe, imekọ ihe ọnụ ... niile agwakọtara na egwu egwu ebe ị na-emikpu onwe gị n'ime ụwa jupụtara na ihe ịtụnanya na ihe omimi. Onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-ewere ọrụ nke nwa Crafton, ma ga-achọpụta onye gburu nna ya site n'ịchọpụta ihe ngosi na nnukwu ụlọ ezinụlọ ochie.
Zụrụ abalị abalị
Ụgbọ elu Fantasy - Arkham ...
Egwuregwu egwu egwu na egwu egwu na-eduga gị n'obodo Arkham, nke ihe ndị e kere eke na-eyi egwu site na ndụ mgbe a nwụsịrị. Ndị na-egwu egwuregwu ga-esonyere ndị agha, na-ewere ọrụ nke ndị nyocha, iji chekwaa ọnọdụ na-etinye ụwa dum n'ihe ize ndụ. Ebumnobi ya bụ ikpokọta ihe nrịbama na akụrụngwa dị mkpa iji chee Ndị Ochie ihu wee mebie atụmatụ ọjọọ ha.
Zụrụ Arkham Horror
The veil - Egwuregwu nke ...
Egwuregwu a na-egwu egwu nwere isiokwu cyberpunk, na ọnọdụ ebe nkà na ụzụ kpaliri ụmụ mmadụ ruo ókè ya, na ebe ọ na-esiri ike ịmata ọdịiche dị n'etiti eziokwu na akụkọ ifo. Ya mere, ị ga-edu ndị na-eguzogide (n'agbanyeghị na akụkụ nke gị bụ n'ibu ...) na-agbalị itinye ókè na nkà na ụzụ mebie nke ukwuu. Ọ bụ ọrụ ndị ama ama dị ka Blade Runner, Carbon Altered, na The Expanse sitere n'ike mmụọ nsọ.
Zụrụ ákwà mgbochi ahụ
Kedu ihe bụ RPG?
Maka ndị ka na-amaghị kedu ihe bụ egwuregwu bọọdụ eji egwu egwuỌ bụ egwuregwu yiri egwuregwu ndị ọzọ n'akụkụ ụfọdụ, mana ebe ndị egwuregwu ga-ekere òkè ma ọ bụ ọrụ. Iji mee nke a, ọ nwere usoro ntọala:
Onye nduzi egwuregwu: Mgbe usoro egwuregwu ịme egwuregwu malitere, ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu ga-arụ ọrụ dị ka onye nduzi ma ọ bụ nna ukwu egwuregwu na-elekọta ya. Ọ bụ onye nduzi na onye na-akọ akụkọ egwuregwu, onye na-akọwa ihe nkiri, akụkụ bụ isi nke ga-akọ akụkọ ahụ ma mee ihe dị ka onye ogbugbo n'etiti ndị egwuregwu na-ekere òkè. Na mgbakwunye, ị nwekwara ike ịkpọ agwa ndị egwuregwu ndị ọzọ na-akọwaghị, dị ka mkpụrụedemede nke abụọ. Ọrụ ọzọ nke onye isi ụlọ akwụkwọ bụ na-ahụ maka iwu ndị a na-agbaso. Iji mee nke a, ọ ga-abụ nke nwere akwụkwọ egwuregwu mgbe niile.
Ndị na-egwu egwuregwu: ha ga-abụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ọrụ dị iche na onye nduzi egwuregwu, bụ ndị na-emekarị ndị dike nke akụkọ ahụ. Onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-enwe mpempe akwụkwọ njirimara ha, nwere njirimara, ikike na data ndị ọzọ dị mkpa nke agwa ha họọrọ. Ị nwekwara ike ịgụnye nkọwa ndị ọzọ dị ka uwe ị na-eyi, ngwa agha, ikike, akụkọ ihe mere eme gị, ihe ike, wdg.
Maapụ: ha na-eje ozi idobe ndị odide n'oge egwuregwu. Ha nwere ike ịbụ eserese eserese, bọọdụ, ma ọ bụ ihe nkiri 3D, ihe nkiri n'ezie, ihe nkwado na ịchọ mma, wdg.
Na ihe niile a, onye ọkpụkpọ ga-ekpebi, na dace ohere nkwado, Kedu ihe ị na-eme na àgwà gị, na onye nduzi egwuregwu ga-ekpebi ma enwere ike ịme ihe ndị ahụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ihe isi ike, na na a na-asọpụrụ iwu. Ọzọkwa, nna ukwu ga-ekpebikwa ihe omume NPC ma ọ bụ agwa ndị na-abụghị onye ọkpụkpọ na-eme.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'obi na egwuregwu bọọdụ na-arụ ọrụ ha na-emekọ ihe ọnụ, ọ bụghị asọmpi dị ka egwuregwu ndị ọzọ. Ya mere, ndị egwuregwu ga-emekọ ihe ọnụ.
Ụdị egwuregwu eji egwu egwu
N'etiti ụdị na variants egwuregwu bọọdụ ndị na-egwu egwu bụ ngalaba ndị a:
Dị ka ụzọ e si egwuri egwu
Dị ka ka esi egwu egwu na RPG, enwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti:
Isiokwu: nke bụ ndị a kọwara n'isiokwu a.
Ndụ: nke nwere ike ime na ntọala okike, ụlọ, wdg, na ejiji ma ọ bụ etemeete maka njirimara.
Site nzipu ozi- Enwere ike ịkpọ ha n'otu n'otu site na iji ozi-e, n'agbanyeghị na ọ bụghị usoro kachasị mma ma ọ bụ ngwa ngwa. Ugbu a email na ngwa izi ozi ngwa ngwa agbalitela usoro a.
Egwuregwu vidiyo RPG: ụdị dijitalụ nke egwuregwu egwu egwu tabletop.
Dị ka isiokwu si dị
Dị ka isiokwu ma ọ bụ style site n'egwuregwu egwu egwu, ị nwere ike ịhụ:
Akụkọ ihe mere eme: dabere n'ezie ihe mere n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ, dị ka agha, mbuso agha, Middle Ages, wdg.
Echiche efu: ha na-ejikọta akụkụ nke akụkọ ihe mere eme, n'ozuzu site na Middle Ages, na ihe dị iche iche nke echiche efu, dị ka ntinye nke wizards, trolls, orcs, na ihe ndị ọzọ e kere eke. Dịka ọmụmaatụ, RPGs epic-medieval fantasy.
Ụjọ na egwu: ọzọ nke isiokwu maka ndị hụrụ ụdị ọdịnaya a, na ihe omimi, mgbagwoju anya na egwu. Ọrụ HP Lovecraft akpalila ọtụtụ n'ime ha. Na mgbakwunye, ị ga-ahụ ha nke ghosts, nnukwu anụ, zombies, vampires, werewolves, ihe e kere eke sitere na ụlọ nyocha sayensị ma ọ bụ nyocha ndị agha, wdg.
Uchrony: eziokwu ọzọ, nke na-egosi ihe omume n'ezie ga-adị ka site n'echiche ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, kedu ka ụwa ga-adị ma ọ bụrụ na Germany emeriela Agha Ụwa nke Abụọ, wdg.
Akụkọ ifo n'ọdịnihu ma ọ bụ akụkọ sayensị: dabere na ọdịnihu nke mmadụ, ma ọ bụ na mbara igwe. Enwere ọtụtụ ụdị dị iche iche ebe a, dị ka egwuregwu dabere na ụwa post-apocalyptic, na ọchịchị nke mbara ala, cyberpunk, wdg.
Oghere Opera ma ọ bụ echiche efu: subgenre metụtara nke gara aga, mana ebe akụkọ sayensị bụ naanị otu ihe ọzọ na ntọala. Ihe atụ ga-abụ eluigwe na ụwa akụkọ ifo nke Star Wars, ebe enwere akụkọ ifo sayensị, mana ọ na-eme na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ ifo.
Otu esi ahọrọ egwuregwu eji egwu egwu kwesịrị ekwesị
Họrọ ezigbo egwuregwu Tebụl ị na-egwu egwu dị nnọọ mfe, ebe ọ bụ na ị ga-elekwasị anya n'ọtụtụ isi ihe, dịka:
Afọ: ọ dị ezigbo mkpa, dị ka ọ dị n'egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ, na a na-amata afọ e mere ya. Ọ bụghị ha niile nwere ọdịnaya kwesịrị ekwesị maka afọ niile, ebe ha nwere ike ịgụnye ihe oyiyi maka ndị okenye, okwu ọjọọ, na ọbụna ndị siri ike maka ụmụaka. Ọ dị mkpa ịmata ụdị afọ ha ga-egwu, ma gaa maka ndị kwesịrị ekwesị.
Ọnụọgụ ndị egwuregwu- Ihe ọzọ ị ga-atụle bụ ọnụọgụ ndị egwuregwu ha na-akwado. Ọ bụrụ na ị ga-eso ọtụtụ ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ gwuo egwu, ọ dị mkpa na a nabatara ndị egwuregwu ma ọ bụ ndị otu zuru ezu, ka ọ ghara ịhapụ onye ọ bụla.
Ihe omumu: nke a bụ ihe ụtọ, ma ị ga-ahọrọ nke kachasị mma maka mmasị gị. Enwere akụkọ ifo sayensị, ụdị dragons na ulo mkporo, nwere isiokwu cyberpunk, apocalyptics, wdg.
Enwere ike ibunye: Ọtụtụ egwuregwu ime ihe na-agụnye iji bọọdụ ma ọ bụ na ọ dịghị mkpa ihe ọ bụla pụrụ iche. Agbanyeghị, ụfọdụ nwere ike ịchọ ohere ka ukwuu iji gbasaa, ma ọ bụ ihe mgbakwunye. Ọ dị mkpa na ị ga-eburu n'uche ohere gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịme egwuregwu nke ọma na oghere ị nwere yana ihe onwunwe ị nwere, ma ọ bụrụ na enwere ike ịme ya na oghere oghere, wdg.
Ikike nhazi: ụfọdụ egwuregwu na-egwu egwu na-akwado nhazi nhazi dị ukwuu, inwe ike ịgbakwunye ihe odide ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke gị, mepụta ihe ịchọ mma iji mee ihe dị ka osisi egwuregwu, wdg. Ndị na-eme ihe na ndị hụrụ DIY na nka, n'ezie na-ahọrọ ụdị egwuregwu egwu egwu a, nke ga-enyere ha aka ịzụlite ihe okike na echiche ha iji mepụta ụdị nke ha. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ na-agụnye naanị akwụkwọ nwere ntuziaka na akụkọ, na ị nwere ike ịmepụta ntọala ya. Ndị ọzọ nwere ike ịgụnye ihe a na-akpọ modul ma ọ bụ ọnọdụ na-eme ka ọrụ gị dịkwuo mfe.
Egwuregwu egwu egwu ndị ọkachamara: ụfọdụ dị mgbagwoju anya ma e bu n'obi karịa maka ndị ọkachamara nke ụdị a. Ọ bụ ezie na ndị na-amu amu nwekwara ike ịmụta ma ghọọ pro, mana ha nwere ike ọ gaghị abụ ihe kacha mma ịmalite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » General » Egwuregwu bọọlụ kacha mma na-egwu egwu
Egwuregwu bọọdụ kacha mma mgbe ọ bụla
Egwuregwu bọọlụ kacha mma Escape Room